Ukuthetha gwenxa: Ithetha ntoni iphulo lakho lokuThengisa ngeDijithali? | Martech Zone
NgoMvulo, nge-5 kaDisemba ngo-2016 UCaroline Mnyama
Unyaka olandelayo umiselwe ukuba ube ngunyaka onomdla wentengiso yedijithali, notshintsho olungenakubalwa loovulindlela kubume be-intanethi. I-Intanethi yezinto kunye nokuqhubela phambili kwinyani ebonakalayo kubangela amandla amatsha okuthengisa kwi-Intanethi, kunye nezinto ezintsha ezenziweyo kwisoftware zihlala zithatha inqanaba leziko. Ngelishwa, nangona kunjalo, ayizizo zonke ezi zinto ziqhubekayo.
Abo kuthi basebenza kwi-intanethi bahlala bejamelana nomngcipheko wobugwenxa, abathi ngokungakhathali bafumane iindlela ezintsha zokungena kwiikhompyuter zethu kwaye benze umonakalo. Abagculi basebenzisa i-intanethi ukwenza ubusela besazisi kunye nokwenza i-malware ephucukileyo. Olunye ulwenziwo lwe-malware, njenge -hlengoware, ngoku lunokukwazi ukuvala ikhompyuter yakho yonke-intlekele ukuba unexesha elibekiweyo kunye nedatha ebalulekileyo apho. Ekugqibeleni, ukubakho kwezi ngxaki kubangela ilahleko enkulu yemali okanye ukuvala iinkampani ngokupheleleyo ngoku kuphezulu kunangaphambili.
Ngobuninzi bezisongelo ezinkulu ezifihle ubunzulu bewebhu, kunokuba lula ukungahoyi usulelo olubonakala lungenabungozi, njengeqhekeza lokungalunganga-akunjalo? Akulunganga. Nokuba ezona ndlela zilula ze-malware zinokuba nefuthe elibi kumkhankaso wakho wentengiso yedijithali, ke kubalulekile ukuba uyazi kakuhle yonke imingcipheko kunye nezilungiso.
Yintoni ukuGweba kakubi?
Ukuguqula gwenxa - okanye intengiso eyingozi -Ingcinga entle kakhulu. Kuthatha uhlobo lwentengiso eqhelekileyo ye-intanethi kodwa, xa ucofa, ukuhambisa kwi-domain esulelekileyo. Oku kunokubangela ukonakala kweefayile okanye nokuxhwila umatshini wakho.
I-2009 saw usulelo kwiwebhusayithi ye-NY Times Khuphela ngokwazo kwiikhompyuter zabatyeleli kwaye wenze into eyaziwa ngokuba yi-'Bahama botnet '; uthungelwano loomatshini abasetyenziselwa ukwenza ubuqhetseba obukhulu kwi-intanethi.
Ngelixa abaninzi bekholelwa ukuba ukungaziphathi kakuhle kuyacaca ngokwaneleyo ukuba ungayibona-njengoko ihlala ithatha indawo yeepop-ups ezingamanyala okanye ezentengiso ze-imeyile- inyani kukuba abahlaseli abakhohlakeleyo bayanda ubuqhetseba.
Namhlanje, basebenzisa amajelo entengiso asemthethweni kwaye benza izibhengezo ezinokukholeleka kangangokuba indawo leyo ayazi nokuba inentsholongwane. Ngapha koko, oonobangela be-cyber ngoku baye baba ngoovulindlela kwezobugcisa babo kangangokuba bade bafunda nezobuchwephesha boluntu ukuze bachonge eyona ndlela yokukhohlisa amaxhoba kunye nokutyibilika phantsi kweradar.
Olu phuhliso lilishwa lithetha ukuba umkhankaso wakho wentengiso yedijithali unokuba uphethe intsholongwane ngoku, ngaphandle kokuba uqaphele. Yiba nalo mfanekiso:
Inkampani ebonakala isemthethweni isondela kuwe kwaye ibuze ukuba ingabeka intengiso kwiwebhusayithi yakho. Banikezela ngentlawulo elungileyo kwaye awunasizathu sokubakrokrela, ke uyavuma. Into ongayiqondiyo, kukuba le ntengiso ithumela inani leendwendwe zakho kwisizinda esosulelekileyo kwaye zibanyanzela ukuba bathathe intsholongwane ngaphandle kokuqonda. Baza kuyazi ukuba ikhompyuter yabo inesifo, kodwa abanye ngekhe bakrokre ukuba ingxaki iqalile ngentengiso yakho, oko kuthetha ukuba iwebhusayithi yakho iya kuqhubeka nokosulela abantu de umntu-omnye abe neflegi yengxaki.
Le ayisiyiyo imeko ofuna ukuba kuyo.
Ukungalunganga kuye kwaqhubeka indlela ecacileyo yokunyuka okucacileyo okoko yabona okokuqala ngo-2007 xa iAdobe Flash Player yayisesichengeni yavumela abahlaseli ukuba bembe iitoni zabo kwiindawo ezinje ngeMyspace kunye neRhapsody. Nangona kunjalo, kukho amanqaku ambalwa aphambili ebomini bayo anokusinceda siqonde ukuba ikhule njani.
Ngo-2010, i-Online Trust Alliance yafumanisa ukuba iziza ezingama-3500 zaziphethe olu hlobo lwe-Malware. Emva koko, iqela elinamashishini elinqamlezayo lenzelwa ukuzama ukulwa nesoyikiso.
Ngo-2013 wabona uYahoo ebethwa ngumkhankaso omangalisayo wokuzisa into eyazisa enye yeefom zokuqala ze -hlengware esele ikhankanyiwe.
ICyphort, inkampani ephambili yezokhuseleko, ibango ukuba ukungaziphathi kakuhle kubonise ukonyuka kwemihlathi nge-325 yeepesenti inyuka ngo-2014.
Ngo-2015, le khomputha iphazamisayo yahamba ngokuhambahamba, njengoko uMcAfee wachonga kubo ingxelo yonyaka.
Namhlanje, ukunganyaniseki kuyinxalenye yobomi bedijithali njengokuthengisa ngokwakho. Oko kuthetha ukuba, njengentengiso ye-Intanethi, kubaluleke ngakumbi kunanini na ngaphambili ukuzazisa ngobungozi obulandelayo.
Ibeka njani iSoyikiso?
Ngelishwa, njengomthengisi kwaye Umsebenzisi wekhompyuter yakho, isoyikiso sakho sokungachaneki siphindwe kabini. Okokuqala, kufuneka uqinisekise ukuba akukho zibhengezo ziintsholongwane ezisasaza indlela yakho yokuthengisa. Rhoqo, intengiso yomntu wesithathu ngoyena mqhubi uphambili wezezimali emva kokunyuselwa kwi-Intanethi kwaye, kumntu onomdla ngomsebenzi wabo, oku kuthetha ukufumana abona baniki maxabiso aphezulu ukuze bazalise intengiso nganye.
Ngenxa yoku, kubalulekile ukuba ubazi ubungozi bokubonelela ngeentengiso usebenzisa ukubiza ixesha langempela; olu cwaningo inikezela ngenkangeleko ethe kratya malunga nomba onokubakho ngeli cebo lokwenza ingeniso kwi-Intanethi. Eyona nto ibalulekileyo, kukuba ukubiza ixesha-lokwenyani kwifandesi-kuza nomngcipheko owongeziweyo. Iqaqambisa ukuba oku kungenxa yokuba iintengiso ezithengiweyo zibanjwa kumaseva eqela lesithathu, phantse lutshabalalise naluphi na ulawulo onokuba nalo kumxholo walo.
Ngokufanayo, njengomthengisi wentengiso ekwi-intanethi, kubalulekile ukunqanda ukosuleleka yintsholongwane ngokwakho. Nokuba unobukho obucocekileyo obucocekileyo kwi-Intanethi, iindlela ezikhuselekileyo zokhuselo lomntu zinokubangela ukuba ulahlekelwe ziidatha zomsebenzi. Nanini na xa uxoxa ngokhuseleko lwe-intanethi, eyona nto iphambili ekufuneka ibekiwe kufuneka ibe yimikhwa yakho. Siza kugubungela indlela yokulawula oku ngakumbi kwisithuba.
UkuGwenxa kunye negama
Xa kuxoxwa ngesongelo esinokubakho sokungaziphathi kakuhle, abaninzi bayasilela ukuqonda ukuba kutheni kubaluleke kangaka- ngokuqinisekileyo ungasusa intengiso esulelekileyo, kwaye ingxaki ihambile?
Ngelishwa, oku akusoloko kunjalo. Abasebenzisi be-Intanethi baxakeke ngokumangalisayo kwaye, njengoko isoyikiso sehacks siya siba sikhulu, baya kwenza konke okusemandleni abo ukunqanda ukuba lixhoba. Oku kuthetha ukuba kwinto esinokuyibiza ngokuba 'yeyona meko ilungileyo' - okt i-pop-up ebonakalayo enobungozi ebonakalayo kwaye isuswe ngaphambi kokuba ifumane ithuba lokwenza nawuphi na umonakalo-kusekho ukubakho kwephulo lakho lokuthengisa ukuba lithanjiswe ngokungenakuphikiswa.
Idumela elikwi-Intanethi liya ngokuya libaluleka, kwaye abasebenzisi bafuna ukubanako ukuziva ngathi bayazazi kwaye bayazithemba iibranti abanikezela kuzo imali yabo. Nokuba lolona phawu lincinci lwengxaki enokubakho kwaye baya kufumana kwenye indawo ukutyala ixesha kunye nemali yabo.
Imantra yayo nayiphi na injineli yokhuseleko elungileyo yile: 'Ukhuseleko asiyomveliso, kodwa yinkqubo.' Ingaphezulu kokuyila i-cryptography eyomeleleyo kwinkqubo; iyila yonke inkqubo ukuze onke amanyathelo okhuseleko, kubandakanya i-cryptography, asebenze kunye. UBruce Schneier, Umkhokeli we-Cryptographer oPhambili kunye noGcisa loKhuseleko lwekhompyutha
Ngelixa i-cryptography ngokuthe ngqo iya kwenza kancinci ukujongana nokungalungisi, uvakalelo lusasebenza. Akunakwenzeka ukuseta inkqubo eya kuthi iqhubeke ikhusela ngokugqibeleleyo. Nokuba usebenzisa obona buchwephesha, kusekho ubuqhetseba obujolise kumsebenzisi endaweni yekhompyuter. Ngokwenyani, into oyifunayo iinkqubo zokukhusela, eziphononongwa kwaye zihlaziywa rhoqo, endaweni yenkqubo yesinye.
La manyathelo alandelayo onke abalulekile ukukunceda ekusombululeni ingxaki ekhula rhoqo yokungaqondi.
Faka Suite yoKhuseleko ebanzi. Zininzi iiphakheji zokhuseleko ezinkulu ezikhoyo. Ezi nkqubo ziya kubonelela ngokuhlolwa rhoqo kumatshini wakho kwaye zinike umgca wokuqala wokhuselo ukuba ngaba unayo intsholongwane.
Cofa kwi-smart. Ukuba uhlala usebenza kwi-Intanethi, ucofa onke amakhonkco entengiso owafumanayo ayibobulumko. Namathela kwiindawo ezithembakeleyo kwaye uya kuwunciphisa kakhulu umngcipheko wosulelo.
Sebenzisa i-Ad-blocker. Ukubaleka kwe-ad-block kuya kunciphisa isixa sentengiso osibonayo kwaye ke, kuya kukuthintela ekuchofeni osulelekileyo. Nangona kunjalo, njengoko ezi nkqubo zilungiselela kuphela iintengiso ezingenayo, ezinye zisenokutyibilika. Kwangokunjalo, inani elinyukayo lemimandla lithintela ukusetyenziswa kwe-ad-block ngelixa ufikelela kuyo.
Khubaza iFlash kunye neJava. Isixa esikhulu se-malware sihanjiswa kwikhompyuter yokugqibela ngezi plug-ins. Ukususa kubo kususa ubuthathaka babo.
Ukukhusela iphulo lakho ledijithali kuLungiso-gwenxa
Faka iplagi ye-antivirus. Ngokukodwa ukuba usebenzisa indawo yeWordPress kwintengiso, kukho ezininzi iiplagi ezinkulu phandle phaya enokuthi ibonelele ngokukhusela intsholongwane.
Unonophelo lwezilwanyana olubanjelwe iintengiso. Ngokusebenzisa ukuqonda, kunokuba lula ukubona ukuba iintengiso zomntu wesithathu zincinci. Musa ukoyika ukuzivalela phantsi ngononophelo ukuba awuqinisekanga.
Khusela ipaneli yakho yolawulo. Nokuba yimithombo yeendaba kwezentlalo, iwebhusayithi yakho okanye ii-imeyile zakho, ukuba umntu ongene ngobuqhetseba angangena nakweyiphi na kwezi akhawunti, kuya kuba lula kubo ukuba batofe ikhowudi enobungozi. Ukugcina iiphasiwedi zakho zinzima kwaye zikhuselekile yenye yezona ndlela zokuzikhusela.
Ukhuseleko olukude. Kukwakho nomngcipheko obonakalayo wokuba abenzi be-cybercriminals bafumane ukufikelela kwiiakhawunti zakho ngothungelwano lwe-WiFi yoluntu. Usebenzisa iNethiwekhi yangasese yangasese (VPN) xa uphuma kwaye uza kubhala idatha yakho ngokwenza unxibelelwano lokuqala olukhuselekileyo phakathi kwakho neseva yeVPN.
Ukuphathwa gwenxa yinto ephazamisayo kubo bonke abathengisi abakwi-Intanethi; leyo engajongi njengokuya naphi na kungekudala. Ngelixa singekhe sazi ukuba ikamva lisiphatheleni malunga ne-malware, eyona ndlela esinokuhlala ngayo phambi kwabagculi kukuqhubeka nokwabelana ngamabali ethu kunye neengcebiso nabanye abasebenzisi be-intanethi.
Ukuba unamava ngokungaziphathi kakuhle okanye naziphi na izinto ezikhuselekileyo zentengiso yedijithali, ke qiniseka ukushiya ingxelo engezantsi! Izimvo zakho ziya kuhamba indlela ende ekuncedeni ukudala ikamva elikhuselekileyo kwi-intanethi kubathengisi kunye nabasebenzisi ngokufanayo.
UCaroline ngumbhali kunye nomthengisi wentengiso Iingcinga ezikhuselekileyo. Ingcali kwezokhuseleko kwi-intanethi, uyazi ngomonakalo onokwenziwa yimalware kwimikhankaso yakho ekwi-intanethi. Uyazi kakuhle izoyikiso ezikwi-Intanethi kunye nokubanakho kwabahlaseli ukuba baqweqwedise iiwebhusayithi kunye neendlela zokukhuthaza. Njengomakethi oligqala, uzimisele ukwabelana ngamava akhe nabantu abaneengqondo ezifanayo ukwenza i-intanethi indawo ekhuselekileyo.